အများဆုံး အသုံးများသော အင်္ဂလိပ်ဓလေ့သုံးစကား အကောင်းဆုံး (၁၀) ခု
မကြာသေးမီက ချစ်သူနှင့်အဆက်ဖြတ်ခဲ့ပြီး စိတ်ညစ်နေတဲ့ အကြောင်းကို အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာစကား အဖြစ်ပြောသော သင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ပြောနေရင်းမှ သူက ရုတ်တရက် သင့်ဘက်လှည့်ပြီး “စိတ်မပူပါနဲ့ကွာ။ သူ့လိုမျိုး မိန်းကလေးတွေက ၁၀ ဆင့်ကို ၁၂ ယောက်တောင် ရတယ် (a dimeadozen)” လို့ ပြောလာတဲ့အခါ သင့်အနေဖြင့် သူ့ကို စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ စိုက်ကြည့်မိမှာမလွဲပါ။ သင်မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ချစ်ခဲ့ရ တဲ့မိန်းကလေးကို ဘာကြောင့် သင့်သူငယ်ချင်းက ၁ ဒေါ်လာ ၂၀ ဆင့်နဲ့ တန်ဖိုးဖြတ်သလဲဆိုတာကို သင်လုံးဝ နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့ “a dimeadozen” ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ စကားစုထဲမှာပါတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးစီရဲ့ မူလအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ နည်းနည်းလေးတောင်မှ မနီးစပ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားကို မိခင်ဘာသာ စကားအဖြစ် ပြောသူများအတွက် “a dimeadozen” ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ “တစ်စုံတစ်ခုသည် ပေါများပြီး အလွယ်တကူ ရရှိနိုင်တယ်” ဖြစ်ပါတယ်။ “a dimeadozen” လိုပဲ စကားစုပါ စာလုံးတစ်လုံးစီရဲ့မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကို ကြည့်ပြီး ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်ကို ဖော်လို့မရတဲ့ စကားစုတွေကို ဓလေ့သုံးစကား (idiom) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားဟာ မိခင်ဘာသာ စကားမဟုတ်သော သူများအနေနဲ့ကတော့ အီဒီယမ်တွေကို နားလည်နိုင်ဖို့ဆိုရင် native speaker ရဲ့အမြင်ဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို အလွတ် ကျက်မှတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အောက်တွင် အများဆုံးအသုံးများသော အင်္ဂလိပ်အီဒီယမ် (၁၀) ခုနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပာယ်တို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်က သူအခုလေးတင် အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းက “piece of cake” ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခြင်းဟာ သူ့ပါမောက္ခသည် နှစ်ဝက် စာမေးပွဲမေးခွန်းအတွက် နူးညံ့တဲ့ကြက်ဥပေါင် မုန့်ပေးတယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းစကားစု၏ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ တစ်စုံတစ်ခုသည် အပြီးသတ်လုပ်ဆောင်ရန် အလွန်မှလွယ်ကူသည် ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားပြီး ပြောင်လက်နေတဲ့ Louis Vuitton တံဆိပ် ပိုက်ဆံအိတ် တစ်လုံးဝယ်လို့ “costs an arm and leg” ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖြတ်ပေးရတယ်လို့ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရင်တော့ ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးဟာ ထူးဆန်းနေမှာပေါ့။ တစ်စုံတစ်ရာရဲ့တန်ဖိုးဟာ လက်တစ်ဖက်နဲ့ ခြေတစ်ဖက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာဟာ ထိုအရာသည် အလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
ခြေထောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အီဒီယမ်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွန်ကြောက်တဲ့ ကဲကုလသင်္ချာ (calculus) စာမေးပွဲကို ဖြေရခါနီးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲခန်းထဲကို မ၀င်မီ သင့်သူငယ်ချင်းက “Breakaleg” လို့ စာလှမ်းပို့လိုက်ပါတယ်။ “သူငယ်ချင်းဟာ ဘာကြောင့် ငါ့အပေါ် ဒီလိုဆန္ဒပြုရတာလဲ။ တို့အချင်းချင်း ပြေလည်တယ်လို့ ထင်နေတာ။” လို့ သင်တွေးကောင်း တွေးနေမှာပါ။ တကယ်တော့ စာဖြေခန်းထဲမှာရှိတဲ့ သင့်နေရာကို သွားရင်းနဲ့ သင့်ခြေထောက်ကျိုးသွားဖို့ သူငယ်ချင်းက ဆုတောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Breakaleg ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ကံကောင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့ ကျောင်းသား တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဒီအီဒီယမ်ကို အများကြီးကြားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hit the books လို့ ပြောသံကြားတဲ့ အခါ ကျောင်းသားတွေဟာ တက္ကသိုလ် စာကြည့်တိုက်ထဲကို ပြေးသွားပြီး ရှိတ်စပီးယား (Shakespeare) ရဲ့ စာပေအရေးအသား အားလုံးကို ကန်လိုက်ကြ၊ လက်သီးနဲ့ ထိုးလိုက်ကြ၊ နပန်းလုံးကြ လုပ်နေတာဖြစ်မှာပဲလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ တကယ်တော့ hit the books ဆိုတာကတော့ စာလေ့လာကျက်မှတ်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ဘာကြောင့်များ သူ့ကြောင်ကို အိတ်ထဲထည့်ရမှာလဲ? ကြောင်က သူ့ကို ဘာများလုပ်မိလို့လဲ? တကယ်တော့ Let the cat out of the bag ရဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ဟာ လျှို့ဝှက်ထားရမယ့် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ဖွင့်ပြောခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နောက်တစ်ခါ Let the cat out of the bag ဆိုတဲ့ စကားကိုကြားရင် ယောင်ပြီး တိရစ္ဆာန်များ အပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ဌာန (animal cruelty control) ကို ဖုန်းလှမ်းမဆက်မိပါစေနဲ့။
ဒီစကားအသုံးအနှုန်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ နဲ့ပတ်သက်လို့ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ တိကျမှန်ကန်စွာပြောခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ သံတစ်ချောင်းကို တူနဲ့ရိုက်တဲ့ အခါ တစ်ချက်တည်းနဲ့ ထိထိမိမိ ကွက်တိရိုက်နိုင်လိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်ကို တွေးကြည့်လိုက်ပါ။
7. When pigs fly (ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါ)
၀က်တွေပျံတာ သင်မြင်ဖူးပါလား? လုံးဝပဲ။ ကျွန်ုပ်လည်းပဲ မမြင်ဖူးပါ။ တကယ်တော့ဒီ when pigs fly ဆိုတဲ့ စကားစုရဲ့ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပန်းရောင်ဝက်ကလေးတွေ က နေမင်းကြီးဆီကို ပျံတက်သွားတာဟာ မဖြစ်နိုင်သလိုဘဲ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုဟာ ဘယ်သောအခါမှ မဖြစ်နိုင်ပါလို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(ပြောင်ပြောင်မြင်တိုင်းရွှေမထင်နှင့်) စာအုပ်ရဲ့အဖုံးကို သင်သဘောမကျတာနဲ့ မဖတ်လိုက်ရတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေ ဘယ်နှစ်အုပ်လောက် ရှိမယ်လို့ ထင်ပါသလဲ? ဒီအီဒီယမ်က စာအုပ်တွေနဲ့သာမက အရာအားလုံးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အများအားဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကတော့ တစ်ခုခုကိုအပြင်ပန်း လက္ခဏာကိုပဲကြည့်ပြီး မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အကြိုက်ဆုံး စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ စားပွဲထိုးက သင့်အတွက် အရသာအရှိဆုံးနဲ့ အကြီးဆုံး ဟင်ဘာဂါကြီး လာချပေးတယ်ဆိုပါစို့။ သင်ကလည်း ဆာလွန်းလို့အဲဒီ hamburger ကြီးကို အလျင်စလိုနဲ့ အကြီးကြီး ကိုက်စားလိုက်တယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့လည်း သင်ကိုက်လိုက်တဲ့ hamburger တစ်ကိုက်ဟာ ကြီးလွန်းလို့ မနင်အောင်ကြိုးစားရင်း ရေသောက်ချနေရတဲ့ သင့်ပုံစံဟာ ရယ်စရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီဥပမာကတော့ ဒီအီဒီယမ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ bite off more than you can chew ဆိုတာကတော့ သင်လုပ်နိုင်တာထက် ပိုသောတာဝန်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ခြင်းလို့ အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
10. Scratch someone’s back (အပြန်အလှန်အပေးအယူလုပ်ခြင်း)
သင့်နောက်ကျောက ယားနေတဲ့နေရာလေးကို ကိုယ့်လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ကုတ်ဖို့ရာ ဘယ်လောက် ခက်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာဖြစ်လို့ ကြုံရာလူတစ်ယောက်ရဲ့ နံစော်နေတဲ့ နောက်ကျောကိုကုတ်ပေးရမှာလဲ? ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ့ကိုသင်ကုတ်ပေးရင် သင်လိုအပ်တဲ့အခါ သင့်ရဲ့နံနေတဲ့ နောက်ကျောကို သူကလိုလားစွာနဲ့ ကုတ်ပေးမှာဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒီအီဒီယမ်ရဲ့ တကယ့် အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ကိုယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ကူညီထားတဲ့သူက ကိုယ့်ကို ပြန်ကူညီမှာပဲဆိုတဲ့ ယူဆချက်နဲ့ သူတစ်ပါးကိုကူညီခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
Voxy.com မှ Top 10 Most Common Idioms in English ကို ကောက်နုတ် ဘာသာပြန်ဆို ထားတာဖြစ်ပါတယ်။